I-Deepin ilandela izinyathelo ze-Windows 11 nezinhlelo zokusebenza ze-Android ezingafakwa kusitolo sayo | Kusuka kuLinux
I-Deepin ilandela izinyathelo zeWindows 11 futhi ungafaka izinhlelo zokusebenza ze-Android ngeSitolo sayo
UJoaquin Garcia Cobo | | Android, Izaziso
Izindaba zakamuva mayelana nokwethulwa kweWindows 11 azishiyanga muntu emkhakheni wezobuchwepheshe, futhi akekho noyedwa emphakathini we-Open Source. Muva nje, iLinux Deepin isimemezele uhlobo olusha lokusatshalaliswa kwayo, I-Linux Deepin 20.2.2 enezimanga eziningi ngaphakathi.
Into ehlaba umxhwele kakhulu ngale nguqulo entsha yeLinux Deepin ukuthi yize ingeyona inguqulo eyindilinga kakhulu, isitolo sayo sibuyekeziwe futhi sesivele sisekela izinhlelo zokusebenza ze-Android.
Ngakho-ke, iLinux Deepin ilandela izinyathelo zeMicrosoft neWindows 11 ne abasebenzisi bangalanda futhi basebenzise izinhlelo zokusebenza ze-Android kusuka ku-Linux Store Deepin.
Ngeshwa, akuzona zonke izinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo ezise-Deepin Store, ezinye zithi azikabi khona izinhlelo zokusebenza ze-Android kuleso sitolo, kodwa siyazi ukuthi izinhlelo zokusebenza ze-Android zingafakwa ngezindlela ezimbili ezihlukene: eyokuqala ngokusebenzisa iziqukathi owesibili ngokukhululeka. Uma sikhetha ukufaka ngeziqukathi, kufanele sibe nokusebenzisa i-kernel 5.10.
IMicrosoft imemezele ukuthi isitolo seWindows 11 sizoba nezinhlelo zokusebenza ze-Android kepha lokho ezinguqulweni zokuqala zale Windows 11 lokhu kungenzeka kube khona. Njengoba kwenzekile ngeLinux Deepin 20.2.2 kepha esimweni sokusatshalaliswa kwe-Gnu / Linux, ukufakwa kwezinhlelo zokusebenza kuzokwenziwa ngokushesha.
I-Linux Deepin 20.2.2 nayo iletha izindaba maqondana ne-boot evikelekile. Le nguqulo entsha iletha ukusekelwa okugcwele ukuthola i-boot ephephile, kepha ukuze siyisebenzise kufanele sisebenzise kuphela i-firmware nesoftware esayiniwe ukusatshalaliswa.
1 I-Linux Deepin isivele inokusekelwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Android kepha isitolo sayo asinazo izinhlelo zokusebenza eziningi njengoba besilindele
2 Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza ze-Android kuLinux ngaphandle kweWindows 11
3 Ukulinganisa komuntu siqu
I-Linux Deepin isivele inokusekelwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Android kepha isitolo sayo asinazo izinhlelo zokusebenza eziningi njengoba besilindele
I-Linux Deepin ukusatshalaliswa okungagcini ngokuvelela isoftware yayo kepha nokusetshenziswa kwayo ngaphakathi kweChina nokuba ukuphela kokusabalalisa okuvunyelwe izikhungo eziningi zaseChina ukuthi zisetshenziswe. Ngakolunye uhlangothi, iLinux Deepin unomphakathi omuhle neqembu elikhulu lonjiniyela lokho kwenze ukusatshalaliswa kukwazi ukusebenzisa futhi kube nezinhlelo zokusebenza ze-Android kusistimu yayo yokusebenza, kepha Ayikho iLinux Deepin 20.2.2 noma iWindows 11 okuwukuphela kwamathuba okuba nezinhlelo zokusebenza ze-Android kusistimu yedeskithophu. Kunabasebenzisi abaningi abazofuna noma abafuna ukuzama izinketho ezinikezwa yizitolo zeWindows 11 noma isitolo seLinux Deepin 20.2.2, kepha iqiniso ukuthi singakwazi ukusebenzisa nokufaka izinhlelo zokusebenza ze-Android cishe kunoma yikuphi ukusatshalaliswa kwe-Gnu / Linux.
Njengamanje kunezinketho eziningi, eziningi zazo ezivela emiphakathini yeFree Software, mhlawumbe enye yezindlela ezithandwa kakhulu yile I-ARC Welder, kodwa ngenxa yomphakathi we-Ubuntu Touch, okungenani basizile le nketho ukuba ithuthuke ngokushesha okukhulu, sinenketho esebenzayo futhi ehambisanayo nezinhlelo zokusebenza ezinjengeWhatsApp, okungenani abanye bathi basebenzisa i-WhatsApp kwi-smartphone yabo nge-Ubuntu Touch. Le nketho ibizwa ngokuthi I-Anbox.
I-Anbox isoftware ezinzile futhi esebenzayo yize isese-beta. Iphuzu elibi lale software ukuthi okwamanje ayisebenzisani nazo zonke izinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo, unezinkinga ngezinhlelo zokusebenza ezidinga i-hardware ethile noma izengezo kusuka ku-Google Play Isitolo. Futhi, okunye ukubuyela emuva kwe-Anbox ukuthi kusebenza kuphela ekusatshalalisweni kweGnu / Linux nge-snap parcel support. Cishe konke ukwabiwa kuyayisekela le phakheji entsha, kepha kusesisithiyo kubasebenzisi abafuna ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ze-Android kusistimu yabo yokusebenza kepha abafuni ukudlulisela amaphakheji we-snap.
Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza ze-Android kuLinux ngaphandle kweWindows 11
Ukwenziwa kwezinhlelo zokusebenza ze-Android ku-Linux kungenziwa nge-Anbox, esebenza njengohlobo lwe-daemon noma inqubo esivumela ukuthi sifake uhlelo lokusebenza lwe-Android.
Ngokufakwa nokusebenza kwe-Anbox ekusatshalalisweni kwethu, okokuqala kufanele sifake amamojula we-anbox ku-kernel yethu ngokusebenza okufanele. Ukufakwa kwamaheda kwenziwa ngokwenza imiyalo elandelayo ku-terminal:
i-sudo engeza-apt-repository ppa: morphis / anbox-support sudo apt ukubuyekeza sudo apt ukufaka i-linux-headers-generic anbox-modules-dkms
Manje kufanele sikhombise ukuthi uhlelo olusebenzayo lulayisha lawa amamojula lapho luqala kabusha, ngoba lokhu senza lokhu okulandelayo esigungwini:
I-sudo modprobe ashmem_linux
I-sudo modprobe binder_linux
Siqala kabusha imishini bese siqhubeka ukufaka i-Anbox ngqo. Njengoba sishilo, i-Anbox idinga ukwesekwa kwamaphakeji we-snap, ngoba ukufakwa kwayo kwenziwa ngesiqukathi se-snap. Uma singenankinga nge-snap, lapho-ke sivula ukuphela bese uthayipha okulandelayo:
I-sudo snap ukufaka --devmode --beta anbox
Lokhu kuzofaka i-Anbox kusistimu yethu yokusebenza. Manje, kufanele sifake amathuluzi we-Android wokugcwalisa i-Anbox. Ukuze senze lokhu kufanele siqhubeke nesiginali bese senza umyalo olandelayo:
Noma sebenzisa okulandelayo uma sisebenzisa ukusatshalaliswa okususelwa kuFedora:
Sudo dnf faka i-android-tools
Lapho sesinamathuluzi we-Android ne-Anbox, kumele sibe nefayela le-apk futhi sizoyikhipha ngokusebenzisa i-terminal ngokulandelayo:
ukufaka i-adb app-name.apk
Lokhu kuzokwenza uhlelo lokusebenza lusebenze futhi lusebenze kahle ngaphansi kohlelo lwe-Gnu / Linux.
Le ndlela inokulinganiselwa okuthile kusukela izinhlelo zokusebenza ezidinga izinsiza ezithile zehadiwe noma ezocingo ngeke zisebenze kahle futhi ngeke sikwazi ukufaka i-Google Play Isitolo noma. Lokho wukuthi, ngeke sibe nesitolo sohlelo lokusebenza esinjenge-Windows 11 noma i-Linux Deepin, kepha singasebenzisa izinhlelo zokusebenza esidinga ukuzisebenzisa kusuka ku-Android ku-Linux yethu.
Ukulinganisa komuntu siqu
Ngokwami, angikholwa futhi angikaze ngikholwe ukuthi kungenzeka ukufaka izinhlelo ze-Android kusistimu ye-Gnu / Linux noma ku-Windows noma i-MacOS kusengaphambili kakhulu ngoba izinhlelo zokusebenza ze-Android zakhelwe ama-smartphone namaphilisi. Lokhu kwenza ukuthi ideskithophu yakho ishiye okuningi ongakufisa, kepha kuyiqiniso ukuthi basekhona abasebenzisi abafuna ukusebenzisa iZwi noma i-Excel noma basebenzise iGoogle Drayivu, futhi kulaba basebenzisi, inketho yeLinux Deepin 20.2.2 noma i-Anbox inketho ilungile. Noma ngicabanga ukuthi akulungile kumsebenzisi ofuna ukuqonda noma afunde nje i-Gnu / Linux ne-Free Software.
Ulwazi oluningi .- I-Linux Deepin 20.2.2 , I-Anbox
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » I-Deepin ilandela izinyathelo zeWindows 11 futhi ungafaka izinhlelo zokusebenza ze-Android ngeSitolo sayo